Yan Aung: Playtagger နဲ့ သီချင်းတင်နည်း (အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်)
Playtagger နဲ့ သီချင်းတင်နည်း (အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက်)
အရင်ဆုံး Playtagger လေးအကြောင်း ပိုရှင်းအောင် ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်.
ကဲ. လိုရင်းကို တိုက်ရိုက်မသွားခင် ဘာကြောင့် ဒီလို Process လေးတွေ လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို နောက်ပြန် ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရအောင်လား..
ဒါဆိုရင် အဲဒီ့သီချင်းကို ဘယ်မှာတင်မှာလဲ.
အင်တာနက်ပေါ်မှာ တင်မှာပေါ့. ဟုတ်တယ်ဟုတ်.
ဒါဆိုရင် စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လား. ခင်ဗျားစက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိနေတဲ့ အင်တာနက် သုံးသူတွေ နားဆင်နိုင်အောင် ခင်ဗျား တစ်ခုခုကို လုပ်ရတော့မယ်.
ဒီမှာ ဝေါဟာရအသစ်တစ်ခု ၀င်လာပြီ. ဖိုင်ဟိုစတင်း(File Hosting) တဲ့…
ဒါကို ခင်ဗျားနားလည်ဖို့ လိုအပ်လာပြီ.
သူက ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတင်ချင်တဲ့ သီချင်းကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ တင်နိုင်အောင် URL လင့်ခ်တစ်ခုထုတ်ပေးတာပေါ့ဗျာ. ပြောရရင်တော့ အငှားတည်းခိုခွင့်ပြုတာပေါ့. ဒါကြောင့်လည်း သူ့ကို Host လုပ်ပေးတယ်လို့ ခေါ်တာပေါ့.
ဒါဆိုရင် ပထမအဆင့် နားလည်သွားပြီဗျာ နော်.
အဲဒါကို အကျယ်ချဲ့ပြီး ထပ်ပြောရရင်တော့ သီချင်းမှတင်မဟုတ်ပါဘူး. အားလုံးအသုံးပြုနိုင်အောင် တစ်စုံတစ်ခုကို ဝေမျှတော့မယ် ဆိုတာနဲ့ ခင်ဗျားဟာ ဖိုင်ဟိုစတင်း ကိစ္စကို အနည်းနဲ့အများ ထိတွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဖိုင်ဟိုစတင်း ဘယ်လိုလုပ်လဲ ဆိုတဲ့ အသေးစိတ်ကိုတော့ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ. လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
URL Link ကတော့ ရလာပါပြီ. အဲဒါကို ဘယ်လိုတင်ပြရမလဲ.
ဒီနေရာမှာ HTML Coding လေးတစ်ခုကို နားလည်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ. အများကြီးမလိုပါဘူးနော်. တကယ့်ကို နည်းနည်းလေးပါ. လင့်ခ်ချိတ်တဲ့ ကုဒ်ဒင်းလေးပါပဲ. Anchor Tag လို့ ခေါ်ပါတယ်.
<a href= "http://www.mmbloggershelpdesk.blogspot.com">Myanmar Bloggers Helpdesk</a>
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ Myanmar Blogger Helpdesk ဆိုတဲ့ site လေးကို လင့်ခ်လှမ်းချိတ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
အခု ကျွန်တော်တို့ သီချင်းတင်ဖို့ သီချင်းကို Host လုပ်ပြီးပြီ. လင့်ခ်လည်း ထုတ်ပြီးပြီ. တင်တော့မယ်ဆိုတော့ အပေါ်က ပြထားတဲ့ အတိုင်းလေး လင့်ခ်ချိတ်လိုက်ရင် ရပြီလား…
<a href= “http://www.fileden.com/files/2007/9/23/1451933/Nay%20Chin%20Dar%20Minn%20Ah%20Narr.mp3”>နေချင်တာ မင်းအနားမှာ</a>
လုပ်ပုံလုပ်နည်းကလည်း မှန်ပါရဲ့နဲ့ ဘာလို့ ဒီ playtagger လေးက အလုပ်မလုပ်တာလဲ…
ရှင်းပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်တန်းပလိတ်ထဲမှာ Playtagger နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ script လေး မထည့်ခဲ့လို့ပါ..
အဲဒါကို ဘယ်နေရာမှာ ထည့်ရမှာလဲ. အဲဒီ့ script လေးတွေက ဘာလဲ..
အိုကေ. ဟောဒီ့မှာဗျာ. လိုအပ်တဲ့ script လေးတွေ…
ဘယ်နေရာမှာ ထည့်ရမလဲဆိုတော့ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ရဲ့ တန်းပလိတ်ကို သွားပါ.
ပြီးရင်တော့ </head> ဆိုတာလေးကို တွေ့အောင်ရှာပါ. ရှာလို့တွေ့တာနဲ့ သူ့အပေါ် ကပ်လျက်မှာ ခုနက ပေးထားတဲ့ script လေးတွေကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ. ဒါဆိုရင် ပြီးသွားပါပြီ…
ကဲ. ကျွန်တော်နောက်ပြန်တွေပဲ ပြန်ပြောပြီးသွားပြီနော်. အခုလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ playtagger နဲ့ သီချင်းတင်နိုင်ဖို့ ဘာတွေ လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ခြုံငုံသုံးသပ်မိပြီလို့ ယူဆပါတယ်.
(၁) Playtagger Script လေးကို ဘလော့ဂ်တန်းပလိတ်ရဲ့ </head> Tag မတိုင်ခင်လေးမှာ ထည့်ပေးရမယ်.
(၂) တင်ချင်တဲ့ သီချင်းကို host လုပ်ပြီး လင့်ခ်ထုတ်ယူရမယ်.
(၃) <a href= “your song URL”>my song</a> ဆိုတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ပို့စ်လေးထဲမှာ တင်ရမယ်.
နေချင်တာ မင်းအနားမှာ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို တင်ချင်တယ်. ဒီတော့ ကျွန်တော် Fileden.com မှာ သွားပြီး သီချင်းလေးကို Host လုပ်ပါတယ်. လင့်ခ်ထုတ်ယူလာခဲ့ပါတယ်.
အဲဒါကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်လေးမှာ ဒီလိုလေးတင်လိုက်ပါတယ်.
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ သီချင်းလေးများ မျှဝေခံစားနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ….
သံစဉ်လှိုင်း ဘလော့ဂ်လေးကိုလည်း လာရောက်အပန်းဖြေဖို့ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်မန္တက ပြုပါတယ်.
Nay Thway said...
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုရန်ရေ။ ကျွန်တော်လည်း အဲတာလေး ထည့်ချင်တာ ကြာပေါ့။
ဘယ်ကနေစပြီး လုပ်ရမှန်းမသိလို့။ ခုတော့ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားလို့ OK
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာရန်။ အခုလို လူပိန်းနားလည်အောင် ရှင်းပြပေးလို့အဆင်ပြေသွားပြီ။
I tried to postaMP3song from mediafire to my blog as your mention. But it's doesn't work and still asking to download. Could you please tell me what is wrong?
playtagger code ကိုလည်း </head> အပေါ်မှာတင်ပြီးပါပြီ။
သီချင်းကို post တင်လိုက်တော့လည်းဘာမှမပေါ်လာပါဘူးဗျာ
ကျနော် email က mickeyrey@gmail.com ပါ။
ko ye' said...
wma အမျိုးအစား အသံဖိုင်တွေကို တိုက်ရိုက်နားထောင်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဗျာ.. ပြောပြပေးပါဦး။ အခုဟာက တင်လို့ပဲရတယ်။ ဒေါင်းလုပ်မဆွဲဘဲ နားထောင်လို့ရအောင်လေး ပြောပြပေးပါဦး။
ကိုရန် ပြောသလို လုပ်ကြည့်တယ် အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်.. အခုလိုမျိုး သေးစိတ်ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုရန်မှာ မိန်းမချောချောလေးတွေ အများကြီးရပါစေဗျာ..တကယ်ပါ
Henry Moeset(မိုးစက်လေးရဲ့မိုးစက်) said...
please contact my mail ko yan aung; please.
MYANMAR NURSES IN SINGAPORE said...
ကျေးဇူးပြုပြီး myanmarnurses.sg@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပေးပါလား..
ကျတော်တို့ blog ကို ခုမှ စလုပ်တာပါ.
အဆင်မပြေတာတွေုကံ နေလိုပါ
ကို၇န်အောင်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်မေးထားတာလေး သင်ပြပေးထားသလား မသိ၇ပါ ၊ အစကဒီနေ၇ာက နေေ၇းလို၇တာမသိလို့Cbox ကနေသွားေ၇းထား မေ၇းတက်ေ၇းတက်နဲ့ေ၇းလိုက်တာ Enter ခဏခဏ ခေါက်မိလို့တော်တော်အ၇ပ်ဆိုးသွားပါတယ် ၊ တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ ဖျက်လို့ ၇၇င်ဖျက်လိုက်ပါ ၊ အခုလော ကျတော့် Cbox လဲဘာဖြစ်နေလဲ မသိဘူး ပျက်နေပါတယ် ၊
ကိုရန်အောင်ရေ မရဘူးဗျ ။ ကူညီပါအုံး ။ ဖိုင်ဒန်းက အပ်လုပ်မပေးဘူးဖြစ်နေတယ် ဗျာ
းးး Recent Postsးးး
EOT လုပ်ရတာ ခက်ခဲနေသူများအတွက်...
iPhone ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Unlock လုပ်ချင်သူများ...
Playtagger နဲ့ သီချင်းတင်နည်း (အသေးစိတ် ရှင်းလင်းခ...
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Fulbright ပညာတော်သင်ဆု အ...